Dhaabotiin siyaasaa Oromoo – Waligaltee godhachuu
Dhaabotiin siyaasaa Oromoo kan seenadhaan qofa osoo hintaane amma lubbuudhan jiran walitti dhufanii dhaaba cimaa lama ykn sadi ijaaran hawwii Oromoo hedduuti. Akkuma mediyaa irraa argaa jirrutti Oromoo hawwii ofii kana ibsachuurra darbee walgayiif seeminaara qindeessuudhaan akka walitti dhufan haala mijeessaa jiraachuu agarra. Kana keessa kan ganna dura barattoonni Universitii Finfinnee qindeessan marii jalqaba gaarii ture. Ammas marii mediyaa irratti dhimma kana kaasun warri itti dhimman hedduu galata qabu. Kanatti dabalataan Waldaan Qorannoo Oromoo (OSA) sagantaa ofii kan baranaa dhimma kana godhatee ture. Marii bareedatu gaggeeffame dhaabotiin akka DHDUO keessaa hafanis. Walitti dhufeenya dhaabotii siyaasaa kana akkanumatti dimshaashaan dubbachuun hiikkoo hinfidu. Hiikkoo kan fidu sirriitti babbaysanii walitti dhufuu dura waan ta’uu qabu laaludha. Dhaabotiin Oromoo asii gadii kuni yeroo ammaa kana akka dhaabatti walcalanis socha’aa jiru. 1.ABO shanee Gumii (Jaal Dawud Ibsaa) 2.ABO T…
Oromoodhaf falli mariifi jaarsummaadha
Mirga Oromoo argate eegaa, ofiifis mariidhan Yeroo ammaa kana Oromoo mirga dur argatee hinbeekne argachaa dhufuun isaa waan halamuu miti. Yoo xiqqaate Oromoon harki caalan hidhaadhaa bahuun bu’aa tokko. Hanqinoonni hedduun akkuma jirutti ta’us bu’aan argame kuni waan xiqqaa miti. Bu’aa hara argame kuni immoo lubbuuf dhiiga ijoollee Oromootin argame malee dhaaba siyaasaa tokkoon miti. Sabni Oromoo akka sabaatti tokkummaadhan ka’ee kan diina cinaa hiriires kan lammii cinaa hiriires walitti diigee irra oolee moo’ate. Haata’u malee bu’aa lubbuun ijoollee Oromoo - QEERROOn waggoota sadan darban kana qofa kuma jahaa ol ta’u itti dhabne kana wal saamun mul’achaa jira. Dhaaboliin Oromoo anatu kana fide, anatu abbaa mirgaati isa jedhurratti ifatti walirratti duulaa jiru. Kunimmoo dhumaatii har’allee Oromoota gara dhiyaa fi bahaatin gaggeeffamaa jiruuf sababa ta’uu Oromoon tolcheeti beeka. Keessattuu waliigaltee dhabuun DhDUO fi ABO shanee jidduu jiru ummata keenya jeeqaa jira, jeequfis jira. Kana…
Kitaabni Qabsoon Oromoo Eessaa Karam gabaarra oole
QABSOON OROMOO EESSAA KARAM Barreessan - Asnaaqaa T.Irkoo (T. G) Maxxansa 4ssoo WAxabajjii 2018
Kitaabni kuni maxxansaa haaran gabaarra oolera! Maxxansaa 4ssoo haala yeroo waliin walsimatee fooyya’e.
Maxxansaa jalqabaa kitaabichaa bara 2009 Norway, bara 2013 fi 2014 Finfinneetti maxxanfamee hedduu gurguramee ture.
Kitaabichis: Seenaa Qabsoo Oromoo qorachuudhan Qabsoo Oromoo kan biyyoota biraatin walbira qabuudhan Gadaan akkamitti Oromoo akka bulchaa ture yaadachuudhan Haala yeroo ammaa dhaaboliin siyaasaa Oromootifi ummanni Oromoon biyyattifi alatillee keessa jiru kan durii waliin walbira qabuudhan, Haala siyaasaa Oromoo mariif isiniif dhiyeessa.
Kitaabni kuni gabaarra oolera.
Kitaabicha Manneen kitaabaa Finfinnee fi Adaamaa argattu. Warri raabsuu barbaaddan: Karaa asii gadii kanaan nu quunnamuu dandeessan: +251910423762 +251931289238 hordofaa@gmail.com +4799151829
Biyya teenya deeffachuuf Kora Oromoo barbaachisa
Biyyi takka jiraachuf lafa, ummata, afaan, aadaa, seenaa kkf qabaachun bu'ura dubbiiti. San booda immoo biyya san kan bulchuuf sirna ittiin bulchu qabaachun immoo jiraachuu biyya saniitif hundeedha. Oromiyaan waggaa gara 150 harka alagaatin bulaa turuu waan hedduu ragaa barbaadun nama barbaachisuu miti, waan addunyaan marti beektu waan ta'eef. Waggaa dhibbaa ol akka Oromoon fedhutti osoo hintaane akka halagaan fedhuttif isaanif tolutti qajeelchanii nu bulchaa turuun isaanii gaafii hinqabu. Oromoonis alagaadhan buluuf qabeenya isaa samamu kanarratti falmaachaa turuun waan hedduun keenya keessatti guddanne. Egaa falmaan biyya Oromiyaa deebisanii ijaarrachuu suni deemee amma waan fiixerra gahe fakkaata. Biyyi Oromiyaa akka gaafa waggaa 150 dura Gadaadhan bulaa turtee san amma immoo Gadaan haala hammayyoomen qaramee ittiin buluun sirna namni hedduun hawwu. Yeroo diinni nu bulchaa ture waan dhabne keessaa: - Gadaa - Biyya keenya - Qabeenya keenya - Aadaa keenya - Afaan keenya - Amantii keen…
Kitaabni kuni yeroo gabaabatti gabaarra oola
QABSOON OROMOO EESSAA KARAM
Barreessan - Asnaaqaa T.Irkoo (T. Goolee)
Maxxansa 4ssoo Caamsaa 2018
Kitaabni kuni maxxansaa haaran yeroo gabaabatti gabaarra oolufi! Maxxansaa 4ssoo haala yeroo waliin walsimatee fooyya’e gabaarra oolufi.
Kitaabni kuni Yeroo gabaabatti gabaarra oolufi.
Warri raabsuu barbaaddan: Karaa asii gadii kanaan nu quunnamuu dandeessan:
hordofaa@gmail.com +4799151829 gipheedhugumaa2008@gmail.com
ADO maalif arriitin biyya galuun barbaachise?
Warri ADO maalif ariitidhan biyya galuu murteessan?
Ji’oota muurasa dura Obbo Leencoo lataa gaafilee kana gaafatamanii turan: Dhuguma amma dhaabni keessa Qeerroo hogganuu danda’aa? Dhaabni biyya alaatii dhufu kuni fedha qeerroo guutuu dandeessuu? Gaafii jedhuuf deebin isaanii fedha qeerroo guutus bakka bu’uus hindandeenyu, afaanumaaf jenna malee jedhanii deebisan. Dubbiin isaas dhugaarraa fagoodha nuti qeerroo bulchuuf yaalun jedhan. Afaanumaaf jenna malee dhuguma amma paartin kumtuu biyya alaatii dhufee biyya san bulcha jennee hinamannu jedhan. Eega hinamaninii maalif amma daddaffiin galluu fedhan ree?
Gaafin lammeesoo immoo ADO waan haaraa maal ummataaf fida? KFOn kan kaayyoo walfakkaataa qabu kunoo biyya jiraa, maalif ADO barbaachise isa jedhu hindeebisan.
Dubbiin sadaffaa immoo Maalif alaabaa mataa ofii hinqabanne, maalif alaabaa ABO qabattan isa jedhuufis deebii hinkennan. Akka miseensonno ADO tokko tokko jedhanitti garuu umrii keenya ABO keessatti waan fixneef gatiin ifaajee keenya…
Kitaaba Qabsoon Oromoo Eessaa karam
Maxxansaa haaran fooyya'e yeroo dhiyootti gabaarra oolufi. Kitaaba kana bara 2009 Norway tti bara 2013 immoo Finfinnee mana maxxansa Elleni P.P.PLC karaa namaa maxxansiisen ture. Manni maxxansaa suni eega cufamee turuu isaa odeeffannoon qaba. Haata'u malee kitaabni kuni ammas biyya keessatti maxxanfamee akka gurguramaa jiru irra gaheen jira. Namoonni kitaaba kana gurguraa jirtan eenyurraa bittannii akka gurguraa jirtan yoo naaf dhaamtan namoota seeran ala gurgurataa jiran kana beekun salphaadha. Kunimmoo boruufis eenyuyyuu gargaara. Hayyee maarree hojii qulqulleessuu kana haa hojjennu kaa. Karaa biraa kitaaba kana maxxansaa haaran yeroo dhiyootti fooyya'ee kan gabaarra oolu ta'uu isiniif ibsa.